Maraykanka, 01 October 2018
Mareykanka iyo Canada oo gaaray heshiis ganacsi
Kaddib wada-hadallo xooggan oo daqiiqaddii ugu dambeysay la isla gaaray ayaa Mareykanka iyo Canada waxay gaareen heshiis ganacsi, ka hor inta aan la gaarin waqtigii ay qabsadeen oo ku ekaa xalay saqdii-dhexe.
Mareykanka oo Xiraya Qunsuliyadda Basra
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in in si kumeel gaar ah dib-u-dajin loogu sameeyo diblamaasiyiinta Mareykanka ee ka howlgala dalka Ciraq sababo dhinaca amniga ah.
Cavanaugh iyo Ford oo Markhaati Furay
Guddi Hoosaadka Caddaaladda ee Aqalka Senateka ee Congresska Maraykanka ayaa shalay dhageystay dacwad la xiriirta fara xumeyn la sheegay in garsoore lagu magacaabo Brett Canavanaugh uu u geystay Christine Blasey Fore oo prof. ka ah jaamaca ku taalla gobolka California.
Shiinaha oo beeniyey eedeynta Trump
Shiinaha ayaa beeniyey eedeymo ka yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ahaa in Beijing ay faro-gelin ku hayso doorashooyinka Mareykanka ee dhacaya bisha November ee sanadkan.
Kavanaugh iyo gabadha eedeysay oo hortagaya senate-ka
Garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump u magacaabay Maxkamdda Sare iyo haweeneey ku eedeeyay inuu hadda ka hor isku dayey inuu kufasado ayaa maanta lagu wadaa in ay hor-yimaadaan guddi hoosadka cadaaladda ee Golaha Senate-ka.
Trump iyo Kim oo Kulan kale Qorsheynaya
Madaxweynaha Maraykanka D. Trump ayaa Arbacadii shalay sheegay in maamulku uu qorsheynayo wareego labaad oo shir heer madaxweyne ah oo uu la qaato hogaamiyaha K. Woqooyi Kim Jong Un, kaas oo xilli dhow shaaca laga qaadi doono.
Wasaaarada arrimaha dibada Mareykanka ayaa soo jeedineysa in ay Mareykanku qaabilaan tiro ka yar qaxootigii la qorsheeyey sanadkii hore in ay ka yimaadaan wadamada Africa iyo Bariga Dhexe.
Khudbaddii Madaxweyne Trump ee QM
Madaxweynaha Maraykanka D. Trump ayaa khudbaddii uu Talaadadii shalay ka jeediyey Golaha Guud ee QM ee magaalada New York waxa uu si adag ugaga hadlay arrinta Iran.
Mareykanka iyo Shinaha oo canshuuro isugu jawaabay
Canshuur kordhin cusub oo kale oo ay isugu jawaabeen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa dhaqan-galay maanta oo Isniin ah.